Nchọpụta miri emi nke Xiaomi RedMiNote 4G | Gam akporosis
Taa, anyị na-ewetara gị, dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo a na-agbakwunye dị n'elu usoro ndị a, nyocha miri emi nke otu n'ime ọdụ nwere ọnụ ala gam akporo ọnụahịa, ọ bụ ezie na nkọwapụta teknụzụ nke dị na ọnụ ndị a gụnyere na nke nke gam akporo mgbasa ozi. Ọnụ ya abụghị onye ọzọ Xiaomi RedMi Rịba ama 4G, ndị dị otú a 5,5 smartphone ihuenyo amama maka naanị n'okpuru 170 Euro.
Fewbọchị ole na ole gara aga, gịnị M dere a post na m na-atụ aro ma ọ bụ mmasị banyere gam akporo ọnụ. A post nke m tụrụ aro ọnụ atọ site na nke ọ bụla, na-agbaso njirisi onwe m mgbe niile ma na-achọ ogo / ụgwọ kacha mma. Na aforementioned post, M na-atụ aro na Xiaomi RedMi Rịba ama 4Gdị ka ebe kachasị amasị m ma na-atụ aro ya na etiti gam akporo. Ihe kpatara m ji họrọ maka nke a dị egwu, na-emebi nke Motorola Moto G2014Can pụrụ ịhụ ha ozugbo na zuru ezu video Review na analysis na-eduga isiokwu a.
1 Nkọwapụta teknụzụ nke Xiaomi RedMi Rịba ama 4G
2 Adịghị ike nke Xiaomi RedMi Rịba ama 4G
3 Ike nke Xiaomi RedMi Rịba ama 4G
Nkọwapụta teknụzụ nke Xiaomi RedMi Rịba ama 4G
Iji malite, gwa gị na anyị nwere ụdị LTE nke RedMi Cheta, ụdị nke na-enyefe ihe nhazi nke Mediatek nke 3G ụdị maka otu Qualcomm Snapdragon 400 Quad Core na 1,6 Ghz ọsọ kacha ọsọ. Na mgbakwunye, n'adịghị ka ụdị Mediatek nke nwere otu SIM abụọ, nke a RedMi Rịba ama 4G nwere naanị oghere kaadi SIM.
Xiaomi RedMi Rịba ama 4G ma ọ bụ Xiaomi HongMi Rịba ama 4G
Usoro njikwa A gam akporo 4.4.2 Kit Kat ya na nhazi nke ya MIUI V5 kwalite na MIUI V6
Ihuenyo 5'5 "IPS nwere mkpebi HD na pikselụ 1280 x 720
Ihe 154 x 78'7 x 9'45 mm
Nhazi Qualcomm Snapdragon 400 Quad isi na 1'6 Ghz
Nchekwa ebe obibi 8 GB na-enweghị nkewa maka data na ngwa 4'98 Gb yana nkwado maka MicroSD ruo 64 Gb
Igwe n'ihu 5MP BSI
Rear igwefoto 13 mpx na FlashLED tinyere autofocus na oghere oghere 2'2
Njikọ Wifi 802.11 a / b / g / n / ac na-akwado bands 2.4 GHz ruo 5 GHz / Bluetooth 4.0 na GPS + AGPS + GLONASS + BDS
Batrị Batrị lithium-ion nke 3100 mAh
Ahịa Euro 168'99
Adịghị ike nke Xiaomi RedMi Rịba ama 4G
Ọ bụla gam akporo ọnụ na-enwe ike inyocha doro anya nwere ya na-eme na adịghị ike, na ikpe nke Xiaomi RedMi Rịba ama 4G Ọ gaghị adị iche, yabụ m ga-edepụta ha:
MIUI nhazi oyi akwaỌ bụ ezie na nke a maka ọtụtụ ndị ọrụ bụ ngọzi ebe ọ bụ na ọ bụ otu n'ime usoro nhazi usoro ịkachasị oke maka gam akporo, ikekwe maka ọtụtụ ndị ọrụ ọ bụ otu ihe megide ya. Ọ bụ ezie na, maka ndị niile na-ahọrọ interface dị ka nke mbụ gam akporo, ị nwere ike iwunye, dị ka m na-egosi gị na vidiyo, ọ bụla Mgbalite maka gam akporo.
Ngwa ngwa ndị arụnyere. Ihe ọzọ m na-ahụ megide nke a Xiaomi RedMi Rịba ama 4G, bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwa China na ntụgharị asụsụ nke arụnyere na ndabara, ọ bụ ezie na, ọ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile, ma e wezụga maka ngwa ole na ole, anyị ga-enwe ike iwepụ ha n'ụzọ dị mfe dị pịa ma jide akara ngosi ngwa ahụ wee dọkpụrụ ya na akara ngosi ahịhịa na elu ihuenyo ahụ.
Ọnụ ọnụ, na gram 189, ọ bụ ezie na ọ bụghị mkpebi ebe ọ bụ, jiri ya atụ na Samsung Galaxy Note 4, naanị ya nwere ihe dị iche na gram 10.
Ọkà okwu n'azụỌ bụ ezie na ụda ahụ doro anya ma nwee nnukwu ike, ọ na-efunahụ ụfọdụ nghọta na ike mgbe etinyere ya na mbara ala.
Ike nke Xiaomi RedMi Rịba ama 4G
Ma ike nke Xiaomi RedMi Rịba ama 4G, ewepu na asọmpi ya kachasị asọmpi maka naanị 169,99 euro, anyị nwere ike ịkọwa echiche ndị a:
Mara mma rụchaa wuru na elu mma plastic na-enye ya a adịchaghị mmetụta.
Nnukwu ihuenyo 5'5 ″ IPS nwere mkpebi HD nke kpam kpam dị ka onye ọrụ ebe ọ nwere capacitive nkịtị bọtịnụ.
178º ihuenyo nlele n'akuku.
Nchekwa nchekwa nke naanị 8 Gb nke anyị nwere onwe anyị maka data na ngwa 4,98 Gb ọ bụ ezie na ha niile dị iji wụnye ngwa ebe ọ bụ na o nweghi nkewa ya na mmachi nke nke a ga-apụta. Na mgbakwunye inwe nkwado maka kaadị ebe nchekwa nke 64 Gb nke ikike nchekwa kachasị.
Batrị 3100 mAh buru ibu nke na-eme ka nnwere onwe dị ukwuu, ihe ma ọ bụ obere ụbọchị zuru oke nke iji ihe dị ka awa ise nke ojiji ihuenyo. N'iji ya tụọ ụzọ, ọnụ ya na-abịarute karịa ụbọchị abụọ site na iji otu ụgwọ.
Akwa mma site na ese foto abụọ, nke mere na ọ bụ ihe kachasị mma ka m nwee ike ịnwale na ọnụ nke ọnụahịa a.
Xiaomi usoro sistemụ, nke gosiputara na nnweta MIUI V6 maka ụdị ngwụcha a, ọbụnadị gosipụtara nkwalite mmelite ahụ na gam akporo 5.0 Lollipop.
Ọnụ ọnụ, naanị ọkara nke ọ bụla gam akporo ọnụ na otu ọrụaka nkọwa.
Imecha na-enye m kpere echiche m, ndị Xiaomi RedMi Rịba ama 4G Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma n'etiti ikuku gam akporo anyị nwere ike ịnweta n'oge a, n'ihi na m a mbụ nhọrọ n'ihu weere site na ọtụtụ eze nke etiti igwe gam akporo onye pụrụ ime ihe nile Motorola Moto G 2014.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na zụta ihe ngosi Xiaomi RedMi 4G, Ana m etinye njikọ nke otu n'ime ụlọ ahịa kachasị n'ịntanetị iji zụta ọnụ ahịa ndị China, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị ka nke ọma yana na omume ọma ya kachasị elu, ewezuga nkwenye gọọmentị ya na nzụta ya niile, bụ na ha nwere ụlọ nkwakọba ihe na Spain, nke na-enye ha ohere ikwenye gị ọnụahịa nke ọnụ na-enweghị atụ egwu omenala, yana ịnyefe naanị 24/48 awa. Ana m ekwu banyere ndị enyi Geeklife ebe ị ga-ahụ nke a Xiaomi RedMi Rịba ama 4G maka euro 168,99 gụnyere ụgwọ mbupu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Nchọpụta miri emi nke Xiaomi RedMi Rịba ama 4G, ma eleghị anya ọ kacha mma kacha mma gam akporo na ọnụ ala dị ala
Ihe na-apụtaghị nke ọma n’isiokwu ahụ bụ ihe ndị karịrị MotoG. N'ezie, naanị m na - ahụ igwefoto 'ma eleghị anya' ka mma, yana ọnụ ọgụgụ mah ka mma na batrị ahụ, mana o doro anya na ọ naghị emetụta mmụba na ndụ batrị, ebe ọ bụ na, ma ọ dịkarịa ala, m nwanyị motoG, ọ ruru 2 d nke oge , na-enweghị nsogbu ọ bụla. O nwekwara uzo abuo na 16gb nke ebule, nke abughi ihe efu. Ọnụ ego ahụ dịkwa ka nke ọ na-ekwu fọrọ nke nta ka ha yie. Ọzọkwa, m ghọtara na ọ dị mfe ịnagide Amazon ma ọ bụ Motorola ma ọ bụrụ na enwere nsogbu.
Ezi Francisco. Ndi ebe nrụọrụ weebụ Geekvida nke ị kwadoro nwere ezigbo ọrụ mgbe azụchara ahịa, ọ tụkwasịrị obi na mbipụta akwụkwọ ikike? Ekwenyesiri m ike ịzụta Xiaomi na weebụsaịtị gị, mana achọghị m itinye mkpịsị aka m.
Ka anyị hụ enyi m Juanjo, mụ onwe m ejirila ọrụ Geekvida mee ihe na eziokwu bụ na ha nwere ntụkwasị obi n'ezie. Nke mbụ, ha nwere ụlọ nkwakọba ihe na Spain ma iwu ahụ na-abatakarị n'ihe dị ka awa 24, n'ọtụtụ 48 awa ma ọ bụrụ na itinyela iwu ahụ n'ehihie. Nnyefe ahụ bịakwutere m site na MRW na oge niile enwere m koodu nyocha nke ngwugwu ahụ,
Banyere nkwa ahụ, ọ bụrụ na i lee ndị ọrụ anya na nyocha ha, o kwesịkwara ntụkwasị obi m niile, ọ bụ ezie na ọ dị mma na enwebeghị m ike iji ya ma ọ bụ na m nwere olile anya iji ya.
N'ikpeazụ, ha nwere ọnụahịa kachasị asọmpi ị nwee ike ịhụ na Internetntanetị, dịka ọmụmaatụ, Xiaomi RedMi Note 4G nke m ji aka gị nye ndụmọdụ ka ị zụta, ị nwere ike ịchọta ya na ụlọ ahịa ndị ọzọ dị n'ịntanetị na ọnụahịa dị ukwuu dị elu karịa nke ahụ anyị ga-agbakwunye oge nchere na nnyefe nke ngwaahịa na ụgwọ mbupu.
O doro anya na Geekvida bụ ụlọ ahịa a pụrụ ịtụkwasị obi, nke dị oke egwu na nke a pụrụ ịtụkwasị obi.
John Valley dijo
Anyị ga-enwe ekele maka ya ma ọ bụrụ na ị ga-agwa anyị otu esi ebugharị ngwa na SD kaadị (ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume), daalụ n'ọdịnihu.
Zaghachi Juan Valle
Lee ị nwere ya na vidiyo na ihe niile ebipụtara naanị 4 awa gara aga:
Daalụ nke ukwuu, ka anyị soro ya.
Ndewo Enwere m ihe edetu x na m emelitere ya na miuv6, ihe niile dị mma, mana amaghị m ebe m ga-ahụ akwụkwọ ntuziaka iji wụnye ụda nke ebudatara na weebụ, ebudatara ha na dwonload na ebee na otu ha si na-depụtaghachiri
Enwere m ajụjụ ndị ọzọ, otu esi etinye emoticons na keyboard?
Naanị m zụtara ya na GeekVida na amaghị m otu esi tinye kaadị 🙁
hello francisco, igwe ,, a obere ajụjụ ,,,, Enwere m ọnụ a, ị nwere ike ịgwa m ma ọ bụrụ na ọ dakọtara na ngwa ngwa ngwa ngwa teknụzụ 2.0, ngwa batrị na-agba ọsọ? ekele n'ọdịnihu mgbape
5 nchọgharị weebụ dị ka onye ọzọ na Chrome maka gam akporo